FBC - Naannoo daangaatti uummatni humnoota farra-nagaa akka ABO saaxiluun nagaa isaaf dhaabbateera
Naannoo daangaatti uummatni humnoota farra-nagaa akka ABO saaxiluun nagaa isaaf dhaabbateera
Finfinnee, Amajjii 02, 2009 (FBC) Too’annaan nageenyaa naannoo daangaa uummaticha hirmaachise jiraattonni Godina Booranaa sodaa keessaa ba’anii fuula isaanii gara misoomaatti akka naannessan akka isaan dandeessise himameera.
Bakkicha kan daawwate gaazexeessaan Faanaa Biroodkaastiing Korporeet humnoota farra-nagaa kana dura daangaa keeniyaa ce’anii biyya keessa seenaa turan too’achuuf hojii hojjatameen jijjiiramni qabatamaan dhufuusaa eerameera.
Ji’oota lama darbanitti qofa miseensota Garee Shororkeessaa ABO torba badii qaqqabsiisuu isaaniin dura too’annoo jala oolchuun danda’ameera.
Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti naannichi kana dura naannoo daangaa miseensonni ABO fi humnoonni farra-nagaa kaan keeniyaa ce’anii biyya keessa seenuuf karaa itti-yaalan waan ta’eef uummanni bakkichaa yaaddoon dabarsa ture.
Humnoonni farra-nagaa kunniin biyya keessa seenuun nama kara deemaa irrattillee saamichaa fi gochoota isa fakkaatan raawwatanii ba’aa turan jedhu jiraattonni.
Humnoonni farra-nagaa yeroo yerootti kan qabamanii fi tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta’us yaaddoo jiraataa haala amansiisaan hin-furre ture.
Hojiin amma hojjatamaa jiru garuu jijjiiramni akka dhufuuf sababa ta’eera.
Jiraattonni akka jedhanitti godinichi daangaa ta’uusaan rakkoo kanaaf saaxilamus, jiraataan hundi humna nageenyaa fi miseensota milishaa waliin ta’uun hojii eegumsaa cimaa akka hojjatamuuf sirni nageenyaa hawaasicha hirmaachise diriirfameera; kanaanis jijjiiramni dhufeera.
Sirnichi jiraattotni naannoo isaaniittis ta’e daangaa irratti nama addaa haaraa wayita argan eenyummaa isaa akka gaafatanii fi yoo shakkan miseensota humna-nageenyaa akka beeksisan kan dandeessisudha.
Nagaa naannoo gurmaa’ee fi hojii nageenya eegsisuu hundumtuu itti-gaafatamummaa fi abbummaan akka hojjatan jiraattonni kunniin ibsaniiru.
Bulchiinsi godinichaas hojiilee hojjateen ji’a lama keessatti miseensota ABO torba Yugaandaan Keeniyaa qaxxaamuranii Moyyaalee fi Danbi Doolloo irratti badii qaqqabsiisuu isaaniin dura too’annoo jala isaan oolcheera.
Bulchaan Godina Booranaa Obbo Liiban Areeroo Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti hojiin rakkoolee akkanaa keessaas ta’e alaa qulqulleeffachuu hojjatamaa jira.
Hojichi hawaasa kan hirmaachise ta’uusaan qabatamaadhaan jijjiiramni kan galmaa’e yoo ta’u, sochiin nagaa mul’ataa jira jedhaniiru bulchaan kun.
Tokkoon tokkoo sochii irratti uummaticha waliin marii akka geggeessu kan kaasan bulchaan godinichaa, rakkoolee ka’anii deebii hatattamaa kennuu dandeessiseera jedhan.
Keessumaa amma ittiin hojjatamaa kan jiru sirni nageenyaa uummata hirmaachise namni hundi itti amanee akka fudhatu gochuudhaa jalqabee gara gochaatti seenuun bu’aasaa arguun danda’ameera.
Jeequmsa yeroo darbe uumame gama tasgabbeessuunis komaand poostichi gaheesaa olaanaa wayita ba’atu hawaasichis hojii kana tumseera.
Bu’aa amma argame kanaan cimsanii itti fufuun nagaa amansiisaa argame hojiin gara misoomaatti jijjiiruu itti-fufeera jedhan Obbo Liiban.
Jiraattonnis hojii hojjatameen bu’aa argameen fayyadamoo ta’uusaanii kaasaniiru.
Nyaata beellada isaanii nagaadhaan qopheessuu kan danda’an yoo ta’u, yaaddoo kana dura keessa turanii ba’anii nagaadhaan ba’anii galuu akka danda’anidha jiraattonni kan dubbatan.
Dabalataanis naannoo daangaatti tasgabbiin waan jiruuf nageenyicha eegsisuun cinatti fuula isaanii gara hojilee misoomaatti naannessuunsaanii ibsameera. Haayilayyasuus Siyyumtu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Gatii qinxaaboo boba’aarratti daballiin taasifame	Wallagga bahaatti oommishti 92.7% walitti qabameera »